महिला सहकारीमार्फत दुई हजारभन्दा बढी खसीबोका बिक्री - नेपालबहस
महिला सहकारीमार्फत दुई हजारभन्दा बढी खसीबोका बिक्री
६ कार्तिक, काठमाडौं । बडादशैँलाई लक्ष्य दाङको लमही नगरपालिकाबाट मात्रै दुई हजार खसीबोका जिल्ला बाहिर बिक्री भएका छन् । लमही नगरपालिकामा रहेका चार सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीमा आबद्ध किसानले यस वर्ष मात्रै दुई हजारभन्दा बढी खसीबोका सहकारीमार्फत बिक्री गरेका हुन् ।
महिला सहकारीमार्फत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले मात्रै आठ सय खसीबोका खरीद गरेको छ । थप दुई सय खसीबोका खरीद गरेर काठमाडौं पठाउने योजना छ । दाङबाट यस वर्ष एक हजार खसीबोका खरीद गरेर काठमाडौं पठाउने योजनानुसार अहिलेसम्म आठ सय खसीबोका खरीद गरिएको खाद्य कम्पनीका निमित्त प्रमुख नकुल चौधरीले जानकारी दिए ।
शुरुमा छ सय खसीबोका खरीद गर्ने कार्यक्रम आए पनि पछि थप चार सय खसीबोका खरीद गर्ने जिम्मेवारी आएको कम्पनीले जनाएको छ । उनले भने ‘खसीबोका सहजरुपमा पाउन थालेपछि जिम्मेवारी पनि बढेको छ । सहकारीमार्फत किसानले व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्न थालेपछि उत्पादन बढ्यो ।’
प्रतिकिलो जिउँदो खसी रु ५३० देखि रु ५५० मा कम्पनीले किन्ने गरेको छ । सहकारी संस्थाले किसानबाट प्रतिकिलो रु ५३० सम्ममा किन्ने गरेको छ । सहकारीले लिने सेवा शुल्क किसानलाई कार्यक्रममार्फत फर्काउने गरेको कर्मठ सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवीमाया थापाले जानकारी दिए । सहकारीमार्फत कारोवार गर्दा सुरक्षित र उचित मूल्य पाउने भएकाले यस वर्ष कारोवार बढेको उनको भनाइ छ ।
वाग्मतीमा पनि गहुँको बीउ अभाव, किसान समस्यामा ५ दिन पहिले
आज हरिबोधिनी एकादशी विशेष पूजा गरी मनाइँदै ५ दिन पहिले
किसानको मागअनुसार गहुँको बीउ छैन ५ दिन पहिले
पशुपालन किसानलाई घाँसको बीउ वितरण ७ दिन पहिले
बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालय बैठक शुरु १२ मिनेट पहिले
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक अन्यौलमा, सदस्यहरुलाई छैन् जानकारी ! १५ मिनेट पहिले
जनताका नेता भन्नेलाई सुरक्षा थ्रेट ? २९ मिनेट पहिले
सचिवालय बैठकमा ओलिविरुद्ध पूरक प्रस्ताव पेश गर्दै प्रचण्ड ४७ मिनेट पहिले
अतिविपन्न तथा दलित घरपरिवारलाई खाद्यान्न सहयोग ४८ मिनेट पहिले
ऐन उल्लङ्घन गर्नेमा पानी उद्योग पहिलो नम्बरमा ४९ मिनेट पहिले
सडक र मोटरेबल पुल आयोजना अलपत्र, नागरिकलाई सास्ती ५८ मिनेट पहिले
अस्पताल सरकारको भन्दा पनि नेपाली जनताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि महत्वपूर्ण २० घण्टा पहिले
धुम्बाराहीबाट तर्सिए ओली, सविचालय बैठक बालुवाटारमै बस्ने ! २ घण्टा पहिले
स्वास्थ्य चौकीहरुमा डाक्टर र औषधि छैन्, तर सरकारका कुरा चैँ ठुला ? १ दिन पहिले
उच्च राजनीतिक भेटवार्ता सकेर चिनियाँ रक्षामन्त्री स्वदेश फिर्ता २ दिन पहिले
न्याय परिषद सदस्यमा श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले स्वीकृत ४ दिन पहिले
कृषि विकास बैंक ह्याकिङ प्रकरण : थप एक पक्राउ १८ घण्टा पहिले
नेपाल र चीनबीच फेरि सैन्य तालिम फेरि सुरु हुने १ दिन पहिले
नायिका बर्षा र रुकमान फिचर्ड खुसीको ‘कति मीठो’ ३ हप्ता पहिले
ओली र प्रचण्ड–नेपाल आफ्नै रणनीति बनाउन व्यस्त ३ हप्ता पहिले
एउटै कम्पनीमार्फत चार महिनामा एक अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियाे १ दिन पहिले
एशिया सेल्टर फोरम’को कार्यशाला काठमाडौंमा हुँदै २ दिन पहिले
कार्तिक नाच प्रस्तुत गर्दै कलाकार ३ दिन पहिले
अंग्रेजी सुधार गर्ने अनौठो १०० वटा तरिकाहरु – भाग १ १ वर्ष पहिले
लेखापालले बजेट नदिएपछि ट्राफिक प्रहरीको असुलीधन्दा ! २ वर्ष पहिले
सेभिल्लासँग बराबरीमा रोकियो बार्सिलोना २ महिना पहिले
गाउँपालिका भरी सडक ६ महिना पहिले